၂ဝ၁၇ ဘတ်ဂျက်၏ တစ်ဝက်ခန့်အား လူထု သက်သာချောင်ချိရေး၊ ပညာရေး ကဏ္ဍများ၌ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ကျူးဘ? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၇ ဘတ်ဂျက်၏ တစ်ဝက်ခန့်အား လူထု သက်သာချောင်ချိရေး၊ ပညာရေး ကဏ္ဍများ၌ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ကျူးဘ?
ဟာဗားနား၊ ဇူလိုင် ၂၂
ကျူးဘားအစိုးရသည် ယမန်နှစ် ၎င်းတို့ဘတ်ဂျက်၏ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းအား ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည်သူများ သက်သာချောင်ချိ ရေးကဏ္ဍများ၌ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ကျူးဘားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Lina Pedraza က ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
”၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျူးဘားဟာ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေးနှင့် ပညာရေးမှာ အများအပြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံခဲ့တယ်”ဟု ကျူးဘားပါလီမန်သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ Pedraza ၏ ပြောကြားချက်အရ ကျူးဘားအစိုးရသည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် လူထုထောက်ကူရေးကဏ္ဍများ၌ ဒေါ်လာ ၁ဝ ဒသမ ၇ ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျူးဘားဘဏ္ဍာရေး ငွေစာရင်းများအရ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေသည် သုံးစွဲငွေထက် သုံးရာခိုင်နှုန်းမျှ ပိုမိုများပြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဘတ်ဂျက်၏ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီများ၏ အခွန်အခမှရရှိ ပြီး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အခွန်မှာ အခွန်ဝင်ငွေ၏ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ တိုးမြှင့်ကောက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံ၏သုံးနှစ်တာ မိုးခေါင်ရေရှားမှု၊ ရေနံခန်း ခြောက်လာမှု၊ အမေရိကန်ဆန်ရှင်များနှင့် ဟာရီကိန်း Irma ၏ ရိုက်ခတ်မှုများက အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်အား လာရောက်ရိုက်ခတ်မှုများရှိ ကြောင်း ဝန်ကြီး Pedraza က ဆိုခဲ့သည်။
ရေစကြိုမြို့နယ် ပခန်းကြီးမြို့ဟောင်းထွက် မြေရေအိုးများ ရောင်းအား ပါးလာသဖြင့် မြေရေအိုးလု?
ပြင်သစ်သမ္မတ မက်ခရွန်၏ ကိုယ်ရံတော်ဟောင်း၏ နေအိမ်အား ပြင်သစ်ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များ ဝင်ေ??
အင်းတော်မြို့နယ်ရှိ ဗုံလုပ်ငန်း မိသားစု တစ်စုမှ ငွေကျပ်သိန်း ၅ဝ ကျော်တန်ဖိုးရှိ စည်တော်ကြ??
သမ္မတဟောင်း ကနေဒီ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရမှု ဖိုင်တွဲများ အမေရိကန်အစိုးရ ထုတ်ပြန်